Faha-59 taonan’ny Filoham-pirenena : Nisesy ny firariantsoa tetsy Iavoloha -
AccueilRaharaham-pirenenaFaha-59 taonan’ny Filoham-pirenena : Nisesy ny firariantsoa tetsy Iavoloha
07/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nifanesy ny firariantsoa tetsy amin’ny lapam-panjakana Iavoloha omaly manoloana ny fitsingerenan’ny taona nahaterahan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, izay nahatratrarany ny faha-59 taonany. Tsy nandalo fotsiny izany satria dia maro ireo firenena izay nandefa ny taratasy firariantsoa ho azy, ary teo ihany koa ireo izay nandefa hafatra tamin’ny alalan’ireo masoivoho vahiny izay monina sy miasa eto Madagasikara. Nisongadina tamin’izany firariantsoa izany ny avy amin’ny filoham-pirenena sinoa tamin’ny alalan’ny masoivohon’izy ireo, izay monina sy miasa eto amintsika, ary teo ihany koa ny an’ny britanika. Tsy diso anjara manoloana izao fahatsiarovana ny tsingerintaona nahaterahan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izao ihany koa ny vahoaka amin’ny maha filoham-panjakana azy. Tsikaritra mantsy ireo firariantsoa maro samihafa tany anatin’ ireny tambazotra sosialy isan-karazany ireny, izay samy nitondran’ny tsirairay ny fiarahabana sy ny fahafaliana.
Tsy diso anjara manoloana ny faha-59 taona ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ihany koa ireo andrim-panjakana maro isan-karazany eto Madagasikara, ary tsy nanadino kosa ireo olom-boafidy. Anisan’ny nitondra ny teny firariantsoa amin’ny mambra ny governemanta ihany koa ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, izay nirary fahasalamana maharitra sy nirary fahombiazana ihany koa amin’ny asa izay tanterahin’ ny filoha « Betsaka tokoa ny asa izay niarahana atoa filoha, ary ny asa mafy izay notanterahinao ho an’ ny firenena dia ny tompo ao ambony anie no hamaly fitia anao amin’izany ». Nandritra izany ihany koa dia ankafaliana sy ampirahalahina tanteraka no nandraisan’ ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izany firariantsoa izany. « hiara- hientana hatrany isika amin’ny asa mafy izay atrehina , ary indrindra ny fampivoarana sy ny fampandrosoana an’i Madagasikara mamintsika ity. Raha ny tahan’ny asa vita dia efa nihoarana ny tanjona napetraka, ary izany no vita dia noho ny fiarahan’ny rehetra misalahy amin-kitsim-po, ka isaorako anareo izany» hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina.